Rainbow Coalition Yogununguna kuZEC Ichiipomera Rusarura
Amai Joyce Mujuru Mutungamiri wePeople's Rainbow Coalition
Mubatanidzwa wemapato anopikisa, weRainbow People’s Coalition unotungamirwa nevambova mutevedzeri wemutungamiri wenyika, Amai Joice Mujuru, wanyorera komisheni inoona nezvesarudzo uchigugunun’una kuti hausi kushevedzwa kumisangano iri kuitwa pakati pekomisheni iyi nemapato ezvematongerwo enyika.
Tsamba yanyorwa nemagweta ari kumirira Amai Mujuru, iyo iri mumawoko eStudio7, inoti People’s Rainbow Coalition haisi kufara nekusashevedzwa kumisangano iri kuitwa pakati pekomisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission, kana kuti ZEC, nemapato ezvematongerwo enyika.
Mutauriri waAmai Mujuru, VaGift Nyandoro, vaudza Studio 7 kuti mubatanidzwa wavo hausi kushevedzwa kumisangano iyi iyo yavanoti iri kuitwa pakati peZEC nemapato matatu ane nhengo dziri muparamende anoti MDC inotungamirirwa naVaWelshman Ncube, MDC inotungamirirwa naVaNelson Chamisa pamwe nebato riri kutonga reZanu PF.
VaNyandoro vati ZEC inofanira kushevedza mapato ose ezvematongerwo painenge ichizeya nyaya dzine chekuita nesarudzo dzegore rino vachiti haasi mapato matatu aya chete ane chekuita nenyaya dzesarudzo munyika.
Vati semubatanidzwa wePeople’s Rainbow Coalition, kana kuti PRC, vane nhuna dzakawanda dzinosanganisira nyaya dzevasori pamwe nevari muchiuto vanonzi vari muZEC pamwe nekusavandudzwa kwemitemo inobata mafambisirwo esarudzo munyika.
VaNyandoro vati sePRC vane nhuna dzakawanda dzine chekuita nesarudzo uye dzimwe nhuna dzacho vakatodzisvitsa kumutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangagwa kunyange hazvo vasati vapindurwa.
Zvichakadai, sachigaro weZEC, Muzvare Priscilla Chigumba, vaudza Studio7 parunhare kuti komisheni yavo haisarudze kuti ndeapi mapato avanotaura nawo nezvenyaya dzesarudzo vachiti mutemo unovasungira kuti vashande nemapato ane nhengo dziri muparamende.
Muzvare Chigumba vakurudzira mapato asina kumiririrwa muparamende kuti vauye vagare pasi nekomisheni yavo voona kuti nyaya iyi yogadziriswa sei.
Vaenderera mberi vachiti vakatosvitsa nyaya iyi kugurukota rezvemitemo, VaZiyambi Ziyambi, kuti vaone kuti nyaya iyi ingagadziriswe sei kuitira kuti mapato ose ezvematongerwo enyika anoda kupinda mumisangano inoitwa pakati pekomisheni nemapato akwanise kupinda mumisangano iyi.
Mutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, vanoti sarudzo dzegore rino dzichaitwa muna Chikunguru.
Mune imwewo nyaya ine chekuita nesarudzo, sangano rinoona nezvekuchengetedzwa kwerunyararo munyika reZimbabwe Peace Project, kana kuti ZPP, rabuditsa gwaro nhasi rinoti vanhu vakawanda munyika vari kumanikidzwa kutenga makadhi eZanu PF munzvimbo dzakawanda munyika.
Sangano iri rati vanhu vakawanda vari kuzongotenga makadhi aya vachityira kuti vakazoshungurudzwa.
Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri weZanu PF, VaSimon Khaya Moyo, kuti tinzwe pamire bato ravo panyaya iyi.
Gwaro reZPP iri rinotiwo harisi kufara nemashoko ekunyombana ari kubuda padandemutande apo vakuru-vakuru munezvematongerwo enyika vari kunyombana zvakakomba. ZPP idzi ndidzo mviromviro dzemhirizhonga ine chekuita nezvematongerwo enyika.